ဆယ်လီတွေရဲ့မဟုတ်မှန်တဲ့ သတင်းတွေတင်ပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ဟန်ငြိမ်းဦးရဲ့ ဘဝအမှန်ကိုဖော်ထုတ်ချပြလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို
“ဟန်ငြိမ်းဦးအကောင့် နောက်ကွယ်ကလူကို သက်သေနှင့်တကွ ပန်ဆယ်လို ဖော်ထုတ်…”ပရိသတ်ကြီးရေ… အားလုံးသိချင်နေကြတဲ့.. ဟန်ငြိမ်းဦး.. အကောင့် ပိုင်ရှင် ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုပန်ဆယ်လိုက.. ယနေ့ပဲ ဖော်ထုတ်လိုက်လို့.. အွမ်လိုင်းမှာ ပွဲစီနေပါတယ်နော် သူဘယ်လိုဖော်ထုတ် လိုက်လဲ ဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်“ဖေ့စ်ဘုတ်နာမည်က ဟန်ငြိမ်းဦး နာမည်ရင်းက စိုးနိုင် အသက်က ၃၆နှစ်မွေးနေ့က.. ၃.၁.၁၉၈၅ (အသက်.၂၈ဆိုတာ လိမ်.ထားတာ။မှတ်ပုံတင်၊ပ.က်စ်ပိုစ့်တွေကအစ မကြာခင်အခြားအ.ကောင့်တွေက တက်လာမယ်။ ..ပေးထားပြီ။ ) ကားနံ.ပါတ် 1M 6136 .Honda Insi.ght အဖြူ
(၁၂လပိုင်း၂၆ရက်နေ့က.. ဆယ်လီတစ်ယေ.ာက်ဆီကငွေညှစ်လို့ရတဲ့.. ပိုက်ဆံနဲ့.. ဝယ်ထားတာ၊ .အမည်ပေါက်မ.ဟုတ်)ထင်ရှ.ားတဲ့.. အမှတ်အသား. မေးစေ့မှာ စောင်မွှေ.းနှစ်ပင်ပေါက်နေ.တဲ့ မှဲ့အပြားရှိ။.. ထိပ်ပြောင်နေလို့.. မန္တလေးမှ.ာဆံပင်တု.သွားလုပ်ရင်း တစ်သိန်းခွဲတ.န် .အပေါစား. ပါးချိုင့်အတုပါ ..တပ်လာ။.. ဆံပင်တုစွပ်ရင်စွပ်။ .မစွပ်ရင်. ဦးထုပ်အမြဲစေ.ာင်းထားတယ်။ ခြေထောက်တ.စ်ဖက် ဆာနေတယ်။ .လမ်းလျှေ.ာက်ရင် ပုံမှန်မဟု.တ်ဘူး။
နေတာက နေပြည်.တော်မှာ။ အလုပ်အကို.င်က ရေသန့်ရောင်းတ.ယ်။ အစ်.ကိုလုပ်တဲ့သူက အုတ်.ရောင်းတယ်။ပညာအ.ရည်အချင်း ၈ တန်း.အောင်။ ပြည်ပကဆိုတာ.. လိမ်ထားတာ.။ ပြည်.ပကသူကို.. A.dmi.n ပေးပြီး Live လွှင့်ခိုင်းတာ .ဘာညာတွေ တရားစွဲ.ခံရခါနီး.တိုင်း လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ပြည်ပဆို.ရင် ထိုင်းတောင် ရော.က်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး။ ပ.က်ပိုစ့်တောင်၂၀၁၉ …မှ လုပ်ရကေ.ာင်းမှန်း .သိတဲ့ကောင်။ မိန်.းမရှိတယ်။ ဦးဟန် ..ဦးဟန်ဆိုပြီ .ဆော်တွေဆီက.. ပတ်ခြူတယ်။ဆယ်လီသတင်းတွေကို ..အတွင်းလူတွေပေးလို့ရတာ။.. အနုပညာလောက.ကလည်း မဟုတ်.ဘူး။ ဟက်ကာလည်း မ.ဟုတ်ဘူး။ဟက်လည်း မဟ.က်တတ်ဘူး။ ဘာမှလ.ည်.း မလုပ်တတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံလိုလ.ာရင် အချို့ နာမည်မကြီ.းတဲ့ မိန်.းကလေးတွေဆီ
တင်လိုက်ရ.မလား ဖွလိုက်ရ.မလား ငွေညှစ်တတ်.တဲ့ စောက်ကျ.င့်ရှိတယ်။စစ်သားလ.ည်း မဟုတ်ဘူး။ စစ်တပ်အ.သိုင်းအဝိုင်းလည်း မဟုတ်ဘူး။အာဏာသိမ်းရင် .တရားမ.စွဲရဲကြအောင် ..စစ်တပ်ကို ဖားယားပြီး.. ဘောမတာ။. အာဏာသိမ်းတ.ာ သူ့အ.ကြိုက်မို့ ..လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ရပြီးအရမ်းပျော်တယ်တဲ့။.. စစ်တပ်ကို .ဘောမတော့ ..စစ်တပ်က ..ဟာတွေက .ဒီ့ကောင့်ကို ဘာသ.ာရေးလူမျိုးရေးမှိုင်းတွေ၊သတင်းအတု.တွေ.. တင်ခိုင်းတယ်။. ဒီကောင်ကလည်း. သူ့ကို. Cover ပေးအောင် .အဆဲခံရမှန်.း သိလျက်.နဲ့ တင်တယ်။ဒါ့ကြေ.ာင့် ဒီပွဲထဲကို မတ်မတ်ပ.န် ဝင်ပါရတေ..ာ့သတဲ့ကွယ်။ .အာဏာသိမ်းကာ.လမှာ ဘ.ယ်သူကမှ တရားမစွဲပါဘူး။တရားစွဲရင် ကြာလို့။ ဟန်ငြိမ်းဦးကြေ.ာင့် အရှက်ကွဲ အကျိုးနည်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေ.ကလည်း လက်ပိုက်ကြည့်.မနေသလို
ဒန်ပေါက်ကျွေးမ.ယ့် အလှူရှင်.တွေကလည်း နေ့လယ်ကတည်.းက Info တွေ ပေးထာ.းပြီးတာမို့ နေပြည်တော်မှာ မြေလှ.န်နေကြပြီ။ဒီဘဲက.. ငကြောက်။ သင်းသင်းတရားစွဲတုန်းက ..မအိပ်နိုင်မစားနိုင်တွေ .ဖြစ်အောင် ..ကြောက်ခဲ့တာ။ အခု ..ဘယ်လောက် ကြောက်နေမလဲ မတွေးရဲဘူး။ကျွတ်.. ကျွတ်… ကျွတ်ငဟန်ရေ ..နင့်ဖာသာ ဆယ်လီအပု.တ်အစပ်တွေ ဖွ.တာ ငါ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ စိ.တ်လည်း မဝင်စားဘူး။..တိုင်မှတ်လို့လည်…း နှပ်မသုပ်ဘူး။ အဖက်.မတန်လို့ စောက်ဖက်လ.ည်း မလုပ်ဘူ.း။ နိုင်ငံရေးမှ.ာ ဝင်ပြီး အာဏာသိမ်းတာခေါင်းဆောင်ပိုင်းလေးပဲပြောင်းတာ၊ အရင်လိုပဲဆိုတာ အာမခံပါတယ်တို့၊ GZ တွေက ဖောက်ခွဲသတ်ဖြတ်တယ်တို့၊ဆရာဇော်ဝေ.စိုးတို့ဖမ်းမိပြီတို့၊ Deep Fa.ke Video တွေ တင်တ.ာတို့ကျ မတရားဖင်ယား.လွန်းရာ ..ကျသွားပြီ။ဒီပေ့ချ်တွေ .မရှိတော့ရင် ..နင်ဟာ ရေ.သန့်ရောင်းတဲ့ ၈ တန်းအေ.ာင်ကောင်ပဲဆိုတာ မမေ့နဲ့။ ဒီပေ့ချ်.တွေအတွက်လည်းဘုရာ.းတရားသာ တထား။ ငါတို့.က မီးကျိုးမောင်းပျ.က် Report ပဲ ထုတတ်တဲ့. အစားတွေ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်ပက .တစ်ယောက်ကို
Admin ပေးပြီး သ.ားက ပြည်ပမှာတွေဘာတွေ မူ.လကျီလုပ်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့။ နင့်ရဲ့. စောက်တင်းစေ.ာက်ဖျင်းပဲ ဖွတတ်တဲ့ဦးာက်သေ.းသေးလေးနဲ့.. ထပ်ဇောင်းထလာရင် ငါ့မှာ နောက်ထပ်အကွက်တွေ. ရှိသေးတယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့။ ငါ ဒီအထိသိထားရင် ဘယ်အထိ သိနေမယ်ဆိုတာ မ.မေ့လိုက်နဲ့ သားရီး။ မှတ်ပုံတင်.တွေ၊ ပက်ပိုစ့်တွေ.က အစ မကြာခင်အခြားအကောင့်တွေကတက်လာ.လိမ့်မယ်။ ပေါက်သမျှ Info တိုင်း ငါ့လက်ကထွက်လာတယ်ဆိုတာ မှတ်ထ.ား။ ကဲ… ပရိုဖိုင်က ထို.င်းမော်ဒယ်ပုံကြည့်ပြီးဦးဟန် ဦးဟန်ဆိုပြီ.း ဖီးလ်တက်နေတဲ့ဟာမတွေ နင့်တို့ဦ.းဟန်ရဲ့ စွခွက်ကိုကြည့်ပြီး သွေးတ.က်လိုက်ကြပါဦး။မကြာခင် ပြင်ပက.နင့်ဘဝကို တွေးရင်း ..စိတ်တောင်မကောင်းဘူး။အို….. စိတ်မကောင်းလိုက်တာရှင်။ဗက်ဟက်ဟက်”